သန်းခေါင်စာရင်းတွင် လူမျိုးလိမ်အမည်ရေးသွင်းမည့်ကိစ္စ ဘူးသီးတောင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ကန့်ကွက် | ngalone
ဘူးသီးတောင်မြို့ အစွန်ဆုံး တောင်ပေါ်အလှတရားများ(ဓါတ်ပုံ)
← ဆင်သင်္ချိုင်း ရှာပုံတော်နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ- ဖိုးကျော့
သန်းခေါင်စာရင်းတွင် လူမျိုးလိမ်အမည်ရေးသွင်းမည့်ကိစ္စ ဘူးသီးတောင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ကန့်ကွက်
ဘူးသီးတောင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူများနှင့် သံဃာများအပါအဝင် အင်အား ၃၀၀၀ကျော်သည် ယနေ့ ၁၆.၃.၂၀၁၄ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၂ နာရီအထိ သန်ခေါင်စာရင်းတွင် ဘင်္ဂါလီအစား ဘင်္ဂါလီများနုတ်မှပြောသည့် အတိုင်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟု ရေးသွင်းသွားမည့်ကိစ္စကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖေါ် ခဲ့ကြသည်။ ထိုဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲတွင် “၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကို အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖေါ်ပေးပါ”၊ “ဘင်္ဂါလီစာရင်းစစ် စာရင်းကောက်အလိုမရှိ”၊ “အနောက်ဘက်နယ်စပ်လုံခြုံရေး ပြည်ထောင်စုလုံခြုံရေး”၊ “ရိုဟင်ဂျာဟုထည့်သွင်းအသုံးပြုလျှင် သန်းခေါင်စာရင်းကို ရခိုင်တမျိုးသားလုံး သပိတ်မှောက်မည်” စသည့် ဆိုင်းဘုတ်ပိုစတာများ ကိုင်ဆောင်ပြီး ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
This entry was posted in အထွေထွေ and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.
ပြောချင်စွာတိရှိကေ ဒေမှာထားခပါ Cancel reply
စာရေးဆရာများ Select Category ကာတွန်း-ဦးအောင်ရှိန် (1) ကိုပိုက် (9) ခင်ခင်ထူး (11) ခင်မောင် (1) ခင်မြတ်သွယ် (1) ခင်ဝမ်း (1) ခင်ငြိမ်းချမ်း (1) ခင်နှင်းယု (3) ခိုင်နန်းစံ (1) ခိုင်လင်း(မေဃဝတီ) (1) ခိုင်နိုင်လင်း (1) ချစ်စံဝင်း (13) ချစ်ဦးညို (30) ဂျာနယ်ကျော်မမလေး (14) ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင် (1) ဂျူး (13) စန်းလွင် (1) ဆန်းလွင် (5) ဆရာခိုင်မျိုးစောင့် (1) ဆရာဝန်တင်ရွှေ (1) ဇ၀န (1) တက်တိုး (1) တက်ထွန်းနီ(မြောက်ဦး) (2) တက်သစ်အောင်(စစ်တွေ) (1) တက္ကသိုလ်စိန်တင် (1) တက္ကသိုလ်နန္ဒမိတ် (5) တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် (4) တင်ထွေး (1) တင်နိုင်တိုး (1) တန်းခိုးဆရာထွန်း (2) တာရာမင်းဝေ (51) ထွန်းရွှေခိုင် (4) ဒဂုန်တာရာ (8) ဒဂုန်ရွှေမျှား (12) ဒွာရာဝတီအရှင်ကုသလ(ငွေသဇင်) (1) ဒဿကျော်စွာ (1) နတ်ရွာမိုး (7) နတ်နွယ် (12) နီကိုရဲ (32) နန္ဒာထွန်း (1) နန္ဒာသိန်းဇံ (8) ပန်းချီ-ဦးသစ်လွင်စိုး (1) ပါရဂူ (17) ပီမိုးနင်း (8) ပံသုခင်(ရခိုင်ပြည်) (1) ဖိုးကျော့ (13) ဖျာပုံနဒီ (1) ဗဂျီအောင်စိုး (2) ဗျူး (4) မင်းခိုက်စိုးစန် (21) မင်းဒင် (5) မင်းလူ (20) မင်းသုဝဏ် (7) မင်းပြားမင်းသိန်းဇံ (2) မင်းမြတ်သူရ (19) မစန္ဒာ (15) မန်းတင် (1) မပာာဆွေ (1) မိုးမိုး(အင်းလျား) (13) မနုသဦးဘစိန် (1) ရခိုင်မဂ္ဂဇင်း (10) ရဝေနွယ်(အင်းမ) (2) လင်းယုန်မောင်မောင် (10) လယ်တီဆရာတော် (2) လယ်တွင်းသားစောချစ် (3) သခင်မြသန်း (1) သတင်း (4) သိန်းထွန်းအောင် (1) သုသုက (1) သူမြတ်မဟာအောင်မြေ (1) ဟိန်းလတ် (1) ဟိန်းဇေ (1) အရှင်ဆန္ဒာဓိက (2) အရှင်ဇ၀န (1) အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ (1) အရှင်ဝါသ၀ (1) အသျှင်စက္ကိန္ဒ (14) အထောက်တော်လှအောင် (3) အထွေထွေ (77) အကြည်တော် (55) ဦးကိုလေး (1) ဦးကံညွန့် (1) ဦးစန်းမောင် (1) ဦးစိုးလွင် (1) ဦးစံထွန်းအောင် (1) ဦးထွန်းရွှေ (1) ဦးထွန်းအောင်ကျော် (1) ဦးဘသန်း (1) ဦးလှဝင်း(လေသူရဲတစ်ဦး) (7) ဦးလှမြင့်(ဂန္ဓမာ) (1) ဦးသန့် (1) ဦးကျော်ဇေယျ (7) ဦးဇောတိက (1) ဦးရွှေဇံ (1) ဦးရွှေအောင် (2) ဦးအောင်လှသိန်း (1) ဦးကြီးဖေ (1) ဦးဦးသာထွန်း(ရခိုင်မြန်မာပဏ္ဍိတ်) (2) ဦးအောင်ချစ် (1) ကျော်ဇံသာ (1) ကျော်အောင် (2) ကျော်ဝင်းဦး (1) ကျော်ငြိမ်း (1) ဆောင်းလုလင် (22) ဆွေဆွေအောင် (2) ဇော်ဂျီ (3) ဒေဝတာ (7) ဒေါက်တာတင်မောင်ထွေး (1) ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် (8) ဒေါက်တာမင်းသိမ်း (1) ဒေါက်တာရဲမြင့်ကျော် (1) ဒေါက်တာလှကြည် (1) ဒေါက်တာသန်းထွန်း (6) ဒေါက်တာသီဟ (1) ဒေါက်တာမောင်မောင်ညို (3) ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခင် (1) ဒေါ်ယဉ်ယဉ်လှ (1) မောင်ခိုင်အောင်(စစ်တွေ) (1) မောင်စံ (1) မောင်စံဖော် (1) မောင်ညိုမှိုင်း(သန်လျင်) (12) မောင်ထွန်းသူ (13) မောင်ဗသိန်း (1) မောင်ပေါ်ထွန်း (2) မောင်မောင်ညွန့် (1) ရွှေစကြာ (1) ရွှေဥဒေါင်း (9) အောင်ခန့် (2) အောင်သင်း (2) အောင်မြတ်ဌေး (1) ဝေမှူးသွင် (11) ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် (18) မြထွန်းအောင် (1) မြသန်းတင့် (24) ၀တီကျော် (1) ၀ိဇ္ဇာ (10) တြီသင်္ခ (3) တြိစက္က (4) S.Sခင်မောင်အေး (1)
ရခိုင်နဲ့ မြန်မာသတင်းတိကို Android ကနီဖတ်ဖို့ အတွက် ငလုံးရခိုင်သတင်းစုစည်းမှု APK
Version(3.0.1)(Download) Version(3.0.0)(Download) Version(2.1.0)(Download) Version(2.0.0)(Download) Version(1.1.0)(Download) Version(1.0.0)(Download)
ငလုံး ဘလော့ တွင် စာမူများ ပေးပို့ လိုလျှင်
သို့ ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။
ngalone for android ကဗျာ ကဗျာ စာအုပ် ကာတွန်း ကျန်းမာရေးစာပေ ငလုံးပြောရေစကား စာအုပ်စင် စိုက်ပျိုး၊မွေးမြူရေးစာအုပ် ဒသန၊အတွေးအမြင် ဓါတ်ပုံ နည်းပညာ ဗဟုသုတ ဘာသာရေးစာအုပ် ဘာသာပြန် ရခိုင်ကဗျာ ရခိုင်စာပေဆိုင်ရာစာအုပ် ရခိုင်ဝတ္ထု ရခိုင်သမိုင်းစာအုပ် ရခိုင်သမိုင်း စာအုပ် ရခိုင်ဆေးကျမ်း ရခိုင်ဝတ္ထု ရယ်စရာဟာသလေးများ ဝတ္ထုစာအုပ် သတင်း သတင်း သမိုင်း အင်တာဗျူး အထ္တုပ္ပတ္တိ အထ္တုပ္ပတ္တိ အသုံးဝင်တဲ့ software လေးများ အထွေထွေ ဥပဒေ စာအုပ် ဆောင်းပါး တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း ပေးစာ မြန်မာ့သမိုင်းစာအုပ် ၀တ္ထုစာအုပ် နိုင်ငံရေးစာအုပ်
ကိုလိုနီဆိုးမွေခံရခိုင်ပြည်နှင့် စစ်တကောင်းသား ဘင်္ဂလီမူဆလင်တို့၏ နယ်သစ်ချဲ့ရေးထကြွမှု-ဆရာခိုင်မျိုးစောင့်
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို အကြောင်းပြ၍ ဘင်္ဂါလီအချို့ တစ်ဖက်နိုင်ငံ၌ စစ်သင်တန်းတက်ရောက်မှုများ ရှိနေ
"လွတ်လပ် သော ရခိုင်နိုင်ငံတော် ကြီးဆီသို့"